WikiLeaks dia tsy afaka mampiasa ny kaonty Coinbase | Vaovao momba ny gadget
Fihemorana vaovao lehibe ho an'ny WikiLeaks. Hatramin'ny naha-voasakana ny kaontin'izy ireo tao Coibase. Fanapahan-kevitra izay maneho olana goavana amin'ny famatsiam-bola ny tranonkala. Ary izany dia mety hitondra olana vitsivitsy ho an'ny sehatra. Ny antony fanakanana sy fanidiana ny kaonty dia satria ny orinasa dia tsy maintsy manaraka ny fitsipiky ny Etazonia.
toy ny ny Departemantan'ny Tahirimbolam-panjakana any Etazonia dia mangataka fa tsy misy orinasa manana orinasa ara-bola amin'ny WikiLeaks. Satria ny iray farany dia natokana amin'ny fanivanana vaovao marobe momba izany, na avy amin'ny governemanta izany na avy amin'ireo masoivoho. Ka nanaiky ny lalàna vaovao i Coinbase.
Araka ny efa nampoizina, rehefa natao ofisialy ity fanidiana ity, Julian Assange dia niantso tamin'ny media sosialy ho an'ireo mpampiasa hanao ankivy ny Coinbase. Fangatahana izay toa tsy misy vokany na kely aza. Saingy manasongadina ny olana goavana amin'ny sehatra izany.
Na dia ny fanakanana ny kaonty WikiLeaks dia tsy midika hoe mitsahatra tsy mandray na mampiasa Bitcoin izy ireo. Azonao atao ny manohy mampiasa ny cryptocurrency amin'ny famindrana amin'ny sehatra tsy fantatra anarana. Ny olana dia, Coinbase dia nanampy betsaka tamin'ny fanatsorana ity fomba ity.
Ity dia olana iray hafa ho an'ny WikiLeaks, izay efa nandramana ireo karazana vahaolana nandritra ny taona maro mba hahafahany mitazona ny tenany sy hamatsy vola azy. Na dia tsy miasa tsara daholo aza ny rehetra. Ny fahatongavan'ireo vola crypto dia fotoana iray ho azy ireo, izay toa manompo azy ireo hatreto. Raha ny tena izy, Assange dia honohono fa manana Bitcoin be dia be, be loatra ka mety ho tapitrisa tapitrisa izy.
Noho izany, ny vola crypto no loharanom-bolany tato ho ato. Fa, raha i Assange manova an'ireny Bitcoins ireny ho lasa vola dia miditra amin'ny fitsipiky ny governemanta izy, izay tiany hialana fotsiny. Ho hitantsika raha manambara fomba famatsiam-bola hafa ny WikiLeaks aorian'ity fanakanana Coinbase ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Coinbase dia manakana ny kaonty WikiLeaks
Lalao miaraka amin'ny Xbox Gold tsy ampoizina miaraka amin'ny Metal Gear Solid V: ny Phantom Pain